Dhalinyaro muqdisho ka hirgaliyay qorshe ay ardayda imtixaanka uga gudbi karaan | Baahin Media
May 7, 2019 - jawaab
Iyadoo todobaadka soo socda bilowgiisa ay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ka bilaaban doonnaan gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa koox dhalinyaro aqoonyahano ah waxay sameeyeen App la yiraahdo ArdayKaal kaas oo ardada ka caawinaya inay si fudud u muraajicaystaan maaddooyinka ugu muhiimsan imtixaankooda.
Kooxdan ayaa sidoo kale App-kan ka dhex sameeyay barnaamij ay ugu magac dareen ISTIJAABI kaas oo ardaydu Mobile-dooda iyo Tablet-yadooda intay isticmaalaan ay galayaan imtixaan sagaal maado ah oo ay isku tijaabinayaan si ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka kama dambeysta ah.
Maadooyinka ay ku liitaan ayaa laga caawin doonaa inta ka dhiman imtixaanka in loo muraajaceeyo.
Faarax Cabdikariim Ahmed oo ah madaxa App-Ka ArdayKaal ayaa BBC-da u sheegay in muhimadda ugu weyn ee ay App-kan ka leeyihiin ay tahay in Ardayga xilli hore uu is ogaado heerka uu ka taagan yahay maaddada uu imtixaanka u galayo si uu markale fursad ugu helo in dib u eegis uu ku sameeyo maaddada uu ku liito.
”Waxaanu rabnaa in aradayga Soomaaliyeed inta uu galin imtixaanka qaranka uu helo fursad lagu sixi karo”. Ayuu yiri Faarax Cabdikariim.
”Annagoo aanan ahayn macallimiintooda ayaan tijaabineeynaa ardayda oo waxaan ka saxeeyna khaladaadka ay sameeyaan, kadibna dib ayaan ugu soo celineeynaa natiijadiisa, taasi oo ardayga tuseeyso maadooyinka uu ku liito”.ayuu intaasi ku sii daray Mr Faarax.
Weriyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa la kulmay mid ka mid ah ardayad ka faa’iidaneeyso barnaamijkan Ardaykaal oo lagu magacaabo Ayaan Shaafici Cabdi ayaa uga warrantay sida barnaamijkaan uga caawinayo imtixaanka guud ay gali doonto toddobaadka dambe.
Image captionQaar ka mid ah ardayda ka faa’iideeysaneyso App-ka
”App-kan waxanu ka helnaa casharro maqal iyo muuqaalba leh oo aad muhiim inoogu ah gaar ahaan xilliyada fasaxa”,ayay tiri Ayaan Shaafici.
Bashiir Maxamed Cabdille waxaa uu isaguna ka mid yahay ardayda ka qeayb qaadatay barnaamijka Ardaykaal waxaa uuna sheegayaa in barnaamijkaan uu wax badan ka baddalay qaabka uu wax u akhristo.
”Waxbarashada waxaa ugu muhiimsan cashar qoridda, marka App-kan waxaa laga helaa casharadii oo qoran oo akhris kaliya kaaga baahan”. Ayuu Bashiir Maxamed BBC-da u sheegay.
Balse waxaa jirta caqabad aanan ardayda qaar u ogolaaneeynin in ay ka faa’iideeystaan App-ka Ardaykaal sababtoo ah badankood ma awoodaan teleefoonka gacanta ee Smart phone-ka loo yaqaan.